सहारा क्लब र कथा नेपालबीच सम्झौता – Khel Dainik
सहारा क्लब र कथा नेपालबीच सम्झौता
पोखरा (खेलदैनिक) । प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको १९औँ संस्करणको अडियो भिडियो अधिकारका लागि कथा नेपाल प्रा.लि. र आयोजक सहारा क्लब पोखरा बीच सम्झौता भएको छ । दुबै पक्षले एक कार्यक्रमका बीच सोमबार एक वर्षका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
← अभ्यासमा फर्किए अभिषेक झापा स्पोर्टस अवार्डमा फुटबल कै वर्चश्व →